အိုဆာကာ | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » အိုဆာကာ
Updated: 2017-02-08 15:27
အိုဆာကာ ရဲတိုက် ပန်းခြံ နဲ့ မက်မန်းတောအုပ်လေး အိုဆာကာဂျပန်
ခန်းဆိုင် (ဂျပန်အနောက်ပိုင်း) မက်မန်း တို့ ထွက် ရှိ ရာနေရာ ။ မက်မန်း ပင် ၁၂၇၀ လောက် စိုက် ပျိုး ထား ပါတယ်။ တစ် လပိုင်း လယ် လောက် မှာ အဖူး ပွင့် ပြီး ၂လပိုင်း အလယ် နဲ့ ၃လပိုင်း အစမှာ ဆိ...
Updated: 2016-06-27 15:41
ဒိုတွန်းဘိုရိ အိုဆာကာ ဂျပန်
ဒိုတွန်းဘိုး ရိ ဟာ အိုဆာ ကာ ကို ကိုယ် စား ပြု တဲ့ မြို့ လို့ တောင် ခေါ် ဆို လို့ ရပါတယ်။ ခါနိ ဒိုးရခု ( ကဏန်း ) နဲ့ ဂုရိ ကိုး ဆိုင်း ဘုတ် ကတော့ ဒိုတွန်းဘိုးရိ ရဲ့ ပြုရုဒ် တဟ် ခု ဖြစ် ပြီး စားသောက် ဆိုင...
Updated: 2016-06-27 15:31
နန်းဘ ပက်ခ် စု ( ပန်းခြံ ) အိုဆာကာ ဂျပန်
နန်းဘ ပက်ခ် စု ( ပန်းခြံ ) ၊ အို ဆာ ကာ နန်းဘ ဒေသ မှာ ရှိပြီး ရုပ်ရှင်ရုံ တွေ စတိတ် ခန်းတွေ ၊ အရောင်းဆိုင်တွေ ၊ အိမ်အလှဆင် ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်ေ တွ ၊ စာရေးကိရိယာပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်တွေ ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည...
Updated: 2016-06-27 15:20
ရှင်းဆိုင်းဘရှိ အိုဆာကာ ဂျပန်
ရှင်းဆိုင်းဘရှိ ၊ အိုဆာကာ နာပါတ် ၀မ်း အစည်ကား ဆုံး မြို့ ဖြစ် ပါတယ်။ ကုန်တိုက် ကြီး တွေ က နေ နာမည်ကြီး ဘရန်း ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် တွေ ၊ စားသောက် ဆိုင် တွေ ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအရောင်း ဆိုင်တွေ ၊ ဟိုတယ်တွေ အစ...
Updated: 2016-06-27 15:03
အမေရိက ကျေးရွာ အိုဆာကာဂျပန်
အမေရိက ကျေးရွာ ၊ ခန်း ဆိုင် ဒေသရဲ့ လူငယ် တို့ ယဉ်ကျေး မှု အသစ် တို့ မွေး ဖွား ရာ နေရာ တစ် ခု ဖြစ်ပြီး ဖက် ရှင် တွေ ၊ ဂီတတွေ ကို လေ့ လာ ခံ စား နိုင် ပါတယ်။ စတိုး ဆိုင် တွေ ၊ ဂီ တ ၊ အစား အသောက် ဆ...
Updated: 2016-06-27 14:17
အိုဆာကာရဲတိုက် အိုဆာကာ ဂျပန်
အိုဆာကာ ရဲ တိုက် ဟာ တိုယိုတိုမိ ဟိဒဲရော်ရှိ က တည် ဆောက် ခဲ့ တာ ဖြစ် ပြီး ( အာဇုချိ မိုမိုရာမ ခောတ် ကနေ အယ် ဒို ခောတ် ) ဂျပန် နိုင် ငံ ရဲ့ ရဲ တိုက် တစ် ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ၈ လွှာမှာ လေ့ လာ ရေး စင် ရှိပြီး အို...
Updated: 2016-06-27 14:06
အိုဆာကာမြို့ သိပ္ပံလေ့လာရေး အဆောက်အဦးပြတိုက် အိုဆာကာဂျပန်
အိုဆာကာမြို့ သိပ္ပံလေ့လာရေး အဆောက်အဦး ပြတိုက် ဂျပန် နိုင် ငံ မှာ ပထမဦး ဆုံး နက္ခတ် ကြည့် မှန်ပြောင်းစင် နဲ့ ပြခန်း ကို ၀ယ်ယူ တပ် ဆင် ခဲ့ တဲ့ ပြ တိုက် တစ် ခုပဲဖြစ် ပါတယ်။ အာကာသ စွမ်း...
Updated: 2016-06-27 13:47
ရှင်းဥမဲဒ စီးတီး ဥမဲဒ မိုးမျှော်တိုက် အိုဆာကာ ဂျပန်
ရှင်းဥမဲဒ စီးတီး ဥမဲဒ မိုးမျှော်တိုက် ။ လိုအပ်တာတွေ အား လုံး တစ်နေရာထဲ မှာ ရနိုင်တဲ့ အဆောက် အဦး ။ ဥမဲဒ မိုး မျှော် တိုက် နဲ့ ၀ဲစတင်း ဟိုတယ် တို့ ဖြစ် ပါတယ်။ မိုးမျှော်တိုက် ကတော့ ဥမဲဒ အထင် ကရ နေရာ မျ...
Updated: 2016-06-27 13:25
ခန်း ဆိုင် နိုင် ငံ တကာ လေဆိပ် အိုဆာကာ ဂျပန်
၂၄ နာရီ ပတ် လုံး လေကြောင်းခရီး စဉ် များ ကို ဖွင့် လှစ် ပေး ထား တဲ့ နိုင် ငံတကာ လေဆိပ် တစ် ခုပဲဖြစ် ပါတယ်။ ပင်လယ် ထဲ မှာ လူအင်အား နဲ့ ပြု လုပ် ထား တဲ့ လူလုပ် ကျွန်း တစ် ကျွန်းဖြစ် ပြီး တော့ ပင်လယ်ပေါ် က...
Updated: 2016-06-27 13:20
ခိုင်း ရု ကန် ( ရေအောက် ကမ္ဘာ) အိုဆာကာ ဂျပန်
ခိုင်း ရု ကန် ရေအောက် ကမ္ဘာ ဟာ အိုဆာကာ ခရိုင် တဲန်းဘိုးဇန် ဒေသ မှာ ရှိ တဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ အဏ္ဍ၀ါ ပြတိုက် ( ရေအောက် ကမ္ဘာ ) ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ ကြီး မား လှ တဲ့ ငါး ကန် ကြီး တွေ ကို အသုံး ပြု ပြီး ပင်လယ်ရေအောက် က...